चारैतिर बाट सर्वसाधारणले नेपाल छोडेर भारत फर्कन दवाव आएपछि सांसद सरिता गिरीले गरिन यस्तो घोषणा – Online Nepal
June 11, 2020 822
काठमाण्डौँ । नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन खारेजको संशोधन दर्ता गराएकी जसपा नेतृ सरिता गिरीले आफू ब्याक नहुने बताएकी छिन् । पार्टी संसदीय दलले विज्ञप्ति नै निकालेर गिरीलाई उक्त संशोधन दर्ता फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेको छ । तर, गिरीले आफू आफ्नो अडानबाट पछि नहटने बताइन् । ‘मसँग पार्टीका महासचिव, प्रमुख सचेतकसहितका नेताहरूले आज भेटेका छन्,’ गिरीले भनिन्, ‘मैले उहाँहरूलाई प्रस्ट रूपमा आफ्नो अडानबारेमा भनिसकेकी छु ।’
‘मैले आफ्नाे संशोधन तथ्यपरक रूपमा राखेकी छु,’ गिरीले भनिन्, ‘विनाप्रमाण सरकारले नक्सासम्बन्धी संशाेधन ल्याएकाे छ, प्रमाण बाहिरी देखाएर हुँदैन, संशोधनमा ती कुरा ल्याउनुपऱ्यो नत्र खारेज हुनुपर्छ ।’ पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै गिरीले संशोधन फिर्ता नलिए कारबाही हुने बताए । गिरीले विगत १० दिनमा संसदमा आफूले गा’ली बे’इज्जती खेपिरहेको तर पार्टीले केही नगरेको गुनासाे सुनाइन् ।
त्यस्तै जनता समाजबादी पार्टीकी नेतृ सांसद सरिता गिरीको घर घेराउ गरिएको छ । ४०÷५० जनाको समूहले उनको घर घेराउ गरेर नारा जुलुस लगाएको नेतृ गिरीले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेकि छन् । नेतृ गिरीले आफ्नो फेसबुक स्टाटस्मा रोमनमा ४०÷५० जनाको समूहले आफ्नो घर घेराउ हालेर नारा जुलुस गरेको कुरा पोष्ट गरेकी छन् । उनले आफ्नो घर अगाडी त्यसरी अपरिचित समूहहरुले नारा जुलुुस लगाएपछि पुलिसलाई खबर गरेको पनि बताएकी छन् ।
उनले लेखेकि छन्,‘अहिले भर्खरै ४०÷५० जनाको समूहले मेरो घर घेरी नारा जुलुस लगाई रहेका छन् । गेटको ताला पनि टुटाएका छन् । पुलिसलाई खबर गरेको छु । आशा गर्दछु पुलिस आउँछन् ।’ उनले आफुले आफ्नो घर घेरेर नारा जुलुस गरेको थाहा पाएर प्रहरीलाई खबर गरेको र प्रहरी आउने कुरामा आफुलाई विश्वास भएको कुरा पनि उल्लेख गरेकी छन् ।
केहि दिन अगाडी सांसद सरिता गिरीले लिम्पियाधुरा आफूले नेपालको नक्सामा कहिल्यैपनि नदेखेको बताएकी थिइन् । कालापानीमा ६० बर्षदेखि भारतीय सेना बसिरहेको बताउदै नेपाल, भारत र चीनबीचको सीमा निश्चित हुनुपर्ने बताएकी थिइन् । पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका सांसद गिरीले भारत र नेपालमा त दुवै सरकारले भनेअनुसार ९८ प्रतिशत समस्या समाधान भैसकेको दावी गरेकी थिइन् ।
सुस्ता र कालापानीको अब २ प्रतिशत समस्या बाँकी छ,‘ यदि नेपालले नयाँ नक्साको बारेमा कुरा ल्याईरहेको छ भने त्यो पनि प्रमाण र सबुत त नेपालसँग हुनु पर्यो,२०५४ सालमा योगी नरहरीनाथले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गरेका हुन् ।उनको देहान्त भईसक्यो । उनको माग के थियो भने सुगौली सन्धिअनुसारको सम्पूर्ण जग्गा नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ ।’लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो नि, यसबारेमा नेपालसँग सबै प्रमाण छ भन्ने जिज्ञासामा उहाँले कालापानी मात्र किन ? हामी त्यो भन्दा अघि पनि ग्रेटर नेपाल, १८६० को सन्धिपछि लिम्पियाधुरा छैन् । यी अभिव्यक्ति उनले टेलिभिजन र अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेपछि अहिले नेपालीहरु आक्रोशित भएका छन् ।
Prevलकडाउन पहिलाेपटक खुकुलाे : यी हुन् खोल्ने र बन्द रहने सेवा र कार्यहरु !
Nextयसरी आफ्नै ज्वाइँले लिए सासूको ज्या*न
२ बच्चा, महिला–पुरुष सहित ४ जनाको डु*बेर मृ*त्यु
नेपालमा कोरोनाबाट मृ*त्यु हुनेको संख्या ७ पुग्यो